Lukashenko लिमिटेड | विदेशी निवेशक बेलारुस मा वर्णन6वर्ष कैद
घर / मध्यस्थता सूचना / Lukashenko लिमिटेड | विदेशी निवेशक बेलारुस मा वर्णन6वर्ष कैद
27/11/2013 द्वारा IAA नेटवर्क
मलाई थाहा छैन, जहाँ सुरु गर्न. सुरुदेखि,? यति धेरै विचार, तर जस्तै नै म सुरु रूपमा, तिनीहरूले तुरुन्तै भाग्नु, काँतर माछा को एक बगाल जस्तै. म जन्म दिन देखि सही सुरु गर्न चाहनुहुन्छ. तर यो नीरस छ – retell, कि सबैको जीवनमा गर्न वस्तुतः समान छ, को सोभियत संघ जन्म. त्यसपछि कुनै एक कल्पना सक्थे, द्वारा जीवनको मानव स्तर चाँडै सबै परिवर्तन हुनेछ भनेर, धेरै परिवर्तनहरू, यो भनेर विश्वास गर्न गाह्रो छ, तर पनि delusional सपना देख्न. किनभने पनि यी अवधारणाहरु प्रकृति मा थिएनन्, पछिल्लो शताब्दीको सत्तर मा. व्यापार, पुनर्गठन, बोलीको स्वतन्त्रता र थप अन्य त्यसपछि धेरै. पनि शब्द “spekulyant” वा “torgaş” एक लेकानेखुसीगर्छ मा uttered, डर भने संक्रमित गर्न. म सम्झना, म एक पटक व्यक्ति पसलमा मेरो आमा देखाए, एउटै सबै हेर्न, र त्यो एक लेकानेखुसीगर्छ भने: “उहाँले एक करोडपति छ, उहाँले पनि राज्य पैसा लिए, कामदारहरूको 'ज्याला भुक्तानी गर्न”. त्यसपछि म केहि बुझिन, यो थियो 1978 वर्ष.
कोठा मधुरो थियो. बल्लतल्ल वस्तुहरु देखिने रूपरेखा औंल्याए, यो जेलमा सेल थियो. shkonarey को एक मा म बसे. अर्को, काँध मेरो आफ्नो टाउको संग, चुपचाप मेरो पत्नी रो. म महसुस, उनको न्यानो आँसु मेरो शर्ट मा गिर रूपमा. त्यो आफ्नो हातले अनुहार ढाकिएको. त्यो सधैं गरे, जब त्यो विशेष चोट थियो. कुनै आवाज थियो. अचानक त्यहाँ थियो कसैले परिचित आवाज: “अलविदा!”. म shuddered. कोठा को गहिराइमा अर्को महिला थियो, म सिर्फ नोटिस गरेन. यो मेरो आमा थियो. दुवै महिला फर कोट थिए. म हल्कासित लुगा थियो. एक शर्ट र खेल प्यान्ट मा. आफ्नो खुट्टा मा प्लास्टिक चप्पल थिए, यी जेलमा छन्, म तिनीहरूलाई घृणा. “अनौठो, तिनीहरूले तातो छैनन् भनेर”, म महिला बारेमा विचार. तर यो एक भयानक भबिष्यको आभास बन्द वार्ड केवल एक प्रयास थियो.
बिंग मेरो सपना घुसे, र म एक वास्तविकता जस्तै देखा. यो जेलमा कल थियो. को6जेल Gomel वृद्धि छु. पहिलो केही सेकेन्ड, म यो भन्दा बढी प्राप्त गर्न सकेनौं. लाग्यो “म कहाँ छु?” म मेरो शरीर को हरेक कक्षमा दस्तक छु. बुना टोपी संग टाउको निकाल्दै, म दुखाइ सजग भए, म कहाँ छु र कसरी म यहाँ पायो. एक सानो बीस भन्दा कम वर्ग मीटर को क्यामेरा आकार. छत साँघुरो खाली अन्तर्गत, र विन्डो छैन भन्न सकिन्छ कि, सम्मिलित बारहरू, र तिनीहरूलाई पछि थप र फलाम स्ट्रिप्स. विन्डो भनिन्छ बासिन्दाहरू “reshkoy”, र स्ट्रिप्स “Resnick”. को कोठामा मा बंक बेड तीन पङ्क्तिहरू उभिए, फलाम छड को वेल्डेड, यो थियो “škonari”. कुना मा तल्ला मा एक प्वाल को stench दिनुभयो, बाट मुख्य कोठा उनको सानो विभाजन विभाजित. त्यो केवल गोडा मा छ जो मानिस ढाकिएको. त्यसैले यो ठाउँ भ्रमण (मलाई आशा छ, तपाईं बुझ्न, यो शौचालय थियो, स्थानीय क्षेत्रीय भाषा मा "dyuchka") यो एक नाटकीय प्रदर्शन मा उत्तेजित गर्दछ, मेरो कुकुर को मलाई सम्झना दिलाउँछ, जो, जब म यसलाई गरे र उहाँलाई देख्यो, म पागल हैरत अनुहार के, हातमा हास्यास्पद राख्दै कान. मलाई लाग्यो, कि चाँडै bursting, भन्दा म पचास मान्छे को उपस्थिति त्यहाँ जाने. कि, कि, हामी यो कोठा यस्तो संख्या मा मा crammed. यसलाई म सिकेका पछि मात्र थियो, आधारभूत मजा कि KGBshniki को Gomel शुक्रवार एक मानिस मा पक्राउ गरिएको थियो, पहिलो दिन उहाँले तथाकथित संग्रह कोठामा बिताएको, जहाँ सबै भराई, जो सप्ताह अघि पक्राउ, पछि देखि जेल प्रशासन सप्ताहन्तमा आदर र मान्छे को कक्षहरू मा वितरण गर्दैन. कि, राम्रो फिर्ता. यो कुरा कसरी फिट वर्णन गर्न कठिन छ, मान्छे खडा र पालैपालो गरेर बाँकी तल बसिरहेका थिए. दर्शक फरक थियो, को बेघर र सूट मा बौद्धिक-देख मानिसहरूसँग अन्त्य देखि, मलाई जस्तै. म सुत्न सक्षम थियो. को लागि सायद मेरो दृश्य बिन्दु, म स्पष्ट गल्ती संस्थाले गरे, र एक मानिस गम्भीर-देख सानो जिद्दी, त्यसैले म एक झपकी लिए, दोस्रो टियर मलाई खाली shkonar. हामी जब "लोड" (अर्को अभिव्यक्ति पाउन गाह्रो छ) क्यामेरा, जो थिए मानिसहरू मध्ये एक पहिले नै कूद र चिच्याए,: "Guys, ध्यान दिएर! त्यहाँ punched!». यो कल्पना गर्न कठिन छ, तर तरिका parted, र ठाउँ फेला परेन. हामीलाई बीच थियो एक मानिस बीस-पाँच र, उनको टाउको तल, टेढो usmehalsya, अझ यति, यो एक Hunted जनावरको एक मुख बिगाराइ थियो. "चूर्ण" वा "fag" – जेलमा सबै भन्दा कम जाति. कल्पना गर्न कठिन, यी मान्छे माध्यम जाँदै छन्, जो स्तर सरीसृप कम छ, तर कुनै एक आफ्नो कोहोर्ट मा प्राप्त गर्न चाहन्थे. र तपाईं सजिलै त्यहाँ प्राप्त गर्न सक्छन्. को प्रशासन विशेष छानबिन अन्तर्गत डर समर्थित, र त्यसपछि मा निन्दा, pressuring को उद्देश्य संग. तर थप पछि. यी मानिसहरू, "Drooping", को फोहोर काम, सफा, शौचालय धुन र पनि ती बलात्कृत, "चोर" - जो आफूलाई जेल मा विशेष सम्पत्ति विचार, "घूर", "अधिकृत केटाहरू". यो कुरा छैन, कसरी शैली मिलाइएको, बिन्दु, तिनीहरू पनि हतियार कि, जो कैदीहरूलाई मा दबाव राख्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, र सधैं शारीरिक छैन, हुनत यो पनि बाहिर शासन छैन, र कहिले काँही पनि प्रशासन प्रोत्साहन. मुख्य आकस्मिक झ्यालखानाको अवधारणाहरु संग सम्पर्कमा "कम" सहभागी हुन, तपाईं गर्नुपर्छ, आफ्नो शेयर विभाजन गर्न ताकि. तसर्थ, म डर बुझ्न, जो गरे सबैलाई राम्ररी कोठामा uzhatsya, परमेश्वरले यस गरिब स्पर्श होइन निषेध.
ढोका अलि विन्डो खोल्न, तथाकथित "फिडर", र त्यो खाना सेवा गर्न थाले. "कास्लो", ʙalanda ' – स्थानीय कठबोली यी तथाकथित जेल भोजन. को पाठ्यक्रम, यो एक सामान्य व्यक्ति, र साथै, म के भयो यस्तो आघात थियो र उहाँले देखे के, कि शायद खान सक्छ. rumpled सानो मान्छे केही दयालु, ingratiating आँखा मलाई देख, म आग्रह, कि
उहाँलाई मेरो भाग खान. मलाई आपत्ति छैन.
जेल मा, त्यो वसन्त बिहान थाले 2005 वर्ष. त्यसपछि मलाई थाहा थिएन, यी पनि हुनेछ 2191.
श्री. उहाँले Mykhailenko मा प्रतिनिधित्व हो लगे & Kirtley, एक पेरिस आधारित अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता बुटीक, र विवाद को आफ्नो सूचना निम्न ठेगाना मा पाउन सकिन्छ: https://italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw1607.pdf
अन्तर्गत दायर: मध्यस्थता सूचना, अस्ट्रिया मध्यस्थता, बेलारुस मध्यस्थता, बेल्जियम मध्यस्थता, फ्रान्स मध्यस्थता, आइसल्याण्ड मध्यस्थता, माउरिटानिया मध्यस्थता, पेरिस मध्यस्थता